Ungamfumana njani umntu kwi-Intanethi: Ezona Webhusayithi ziBalaseleyo | Iindaba zeGajethi
Xa kufuneka sikhangele umntu, sidibana neendlela ezahlukeneyo. Kwixesha elidlulileyo bekufuneka sibhenele kumaphepha amhlophe, angahlali enika iziphumo ezilindelekileyo. Ngokwenyani, xa sifuna ukufumana umntu siyenza ngokukhangela kwi-intanethi. Ngokukodwa ukuba sinegama laloo mntu kuphela, kodwa asazi ngaphezulu.
Ungamfumana njani umntu kwi-Intanethi? Sinezinto ezimbalwa esinokukhetha kuzo namhlanje, esinokufumana ngazo umntu ebesimfuna, ukuze le nkqubo ibe lula kwaye icace gca. Kukho amaphepha ewebhu aliqela oko kunokuba luncedo kule nkqubo yokukhangela.
2 Amaphepha amhlophe
Unxibelelwano lwentlalo lube Enye yeendlela ezilungileyo zokukhangela umntu kwi-intanethi. Kwiimeko ezininzi sinokusebenzisa igama lalo mntu, ukongeza ekubeni nakho ukongeza isixeko, ukuba siyalwazi olu lwazi. Inikwe njengenye yezona ndlela zikhululekileyo xa ujonga abantu, ngenxa yenani elikhulu labantu kwihlabathi liphela abaneprofayile kwinethiwekhi yoluntu edumileyo.
Kufuneka sikhangele ngaphakathi kwi-Facebook Sisebenzisa igama lalo mntu, ukuba sinedatha eyongezelelweyo efana nesixeko ahlala kuso, singayongeza kwangoko emva kwegama lakhe. Siza kuthi emva koko sifumane zonke iziphumo ezihambelana nelo gama, kwezinye iimeko, umahluko wegama uyaboniswa (kunye nonobumba omnye, okanye ukuba lifinyeziwe). Ke kunokwenzeka ukuba simfumane loo mntu.
Singaqhubeka nokusebenzisa amaphepha amhlophe njengangaphambili, kodwa ngoku kwi-intanethi. Kuba banewebhusayithi yabo, onokufikelela kulo eli khonkco. Yindlela yeklasikhi, kodwa iseluncedo xa sifuna ukufumana umntu. Ukwenza oku kunokwenzeka, siyacelwa ukuba sigcwalise ubuncinci enye yezi nkalo zintathu: igama, ifani yokuqala kunye / okanye ifani yesibini. Ngale ndlela, siya kuboniswa iziphumo ezihambelana noko.
Isiseko sedatha esinamaphepha amhlophe sisekude kakhulu. Ke kwimeko yaseSpain, ngakumbi ukuba sifuna umntu ongenabukho kwi-Intanethi, kunokuba yindlela elungileyo. Ulwazi malunga nokunxibelelana nalo mntu luhlala lunikezelwa, njengenombolo yefowuni. Ke ngoko, sinokuzisebenzisa nangaliphi na ixesha ngaphandle kwengxaki enkulu.
Le webhusayithi yenye yeefayile ze- uninzi lwabantu abafuna kakhulu esidibana nabo. Kuba inedatha enkulu, ethi ngokwewebhu, imalunga nezigidi ezingama-3.000 zabantu. Ke ngoko, lukhetho olufanelekileyo xa kufikwa ekufumaneni umntu kwi-Intanethi, kuba maninzi amathuba okuba singamfumana lo mntu. Ukusebenza kwewebhu kuyafana nenkqubo yokukhangela yemveli, kuya kufuneka sisebenzise enye idatha yalo mntu (igama, ifani, isixeko, njl. Ke sineendlela ezimbalwa zokuyifumana.
Into elungileyo yile ikuvumela ukuba ufake amacebo okucoca ulwelo kwiindawo ezininzi, ukuze sifumane iziphumo ezingcono xa siyisebenzisa. Ngale ndlela, sinokuphumelela ngakumbi xa kufuneka sikhangele umntu, ngakumbi ukuba unegama eliqhelekileyo. Enye yezona zigqibeleleyo, kulula ukuyisebenzisa kunye neendlela ezifanelekileyo, ngoko unokufumana loo mntu ubumfuna kwi-intanethi. Ungafikelela kwiPipl kule khonkco.
Esi sixhobo sahlukile, kuba sigxile kulawo matyala apho une-imeyile evela emntwini okanye ujonge umntu osebenza kwinkampani ethile. Ukuba unolu lwazi, ungaguqukela ku-Hunter, yenye yezona ndlela zigqibeleleyo onokukhetha kuzo. Ngokukodwa kwimeko yeenkampani ezinkulu, kunokuba ngumdla ukufumana idatha yomntu, kwaye ke uyazi ukuba unokwazi njani ukunxibelelana naye. Banedatha enkulu kakhulu ekhoyo.
Ngoko ke, yiwebhusayithi elungileyo xa kufikwa ekufumaneni umntu, kodwa ngendlela eyahlukileyo. Kuba kule meko siqala kwiinkcukacha ezahlukeneyo, ezinje ngokuba nedilesi ye-imeyile ngale ndlela. Singakhangela abantu kuzo zonke iintlobo zeenkampani, ezivela kwihlabathi liphela, ngokungathandabuzekiyo enye inzuzo esinikwa yona yile webhusayithi. Ukuba ufuna ukungena, ungayenza kule khonkco.
Njengamaphepha amhlophe, enye iklasi esasikade sinayo ekhaya, kodwa esinokuyisebenzisa ngoku kwi-Intanethi, yi-QDQ. Sisikhokelo esinokusisebenzisa ukufumana ulwazi malunga neenkampani, nangona zinokusetyenziswa ukuba sifuna ukuba nolwazi malunga nabantu. Ke sinokukhangela umntu othile, ukufumana inombolo yomnxeba okanye idilesi, umzekelo. Ikhetho eliqhelekileyo, elihlala likhona ngoku.
Ukukhangelwa kwabantu kule meko kufuneka kusetyenziswe ngendlela eyahlukileyo, kwesi sixhobo. Siyacelwa ukuba singenise ulwazi oluthile malunga nomntu Sikhangela ntoni. Njengoko kusengqiqweni, kufuneka sazise abo sinakho, ukuze sifumane ezona ziphumo zichanekileyo malunga noku. Emva koko ezo ziphumo ezivela kubantu ezihambelana nemigaqo yakho yokukhangela ziya kubonakala. Enye indlela elungileyo yokufumana umntu kwi-Intanethi kwaye ube nokufikelela kwiinkcukacha zabo zonxibelelwano.
Kwindawo yokugqibela, singaya kwenye inethiwekhi yoluntu, kule meko yabasebenzi. Kungenzeka ukuba umntu esikhangela kwi-Intanethi ngumntu esidibene naye ngomsebenzi, okanye esifuna ukunxibelelana naye ngenxa yezizathu zomsebenzi. Ke ngoko, sinokuzama ukufumana ukuba uneprofayile kwindawo eyaziwayo yomsebenzi wenethiwekhi yoluntu. Kwakhona, ukukhangela kule meko kunokuchaneka.
Ukusukela xa ukhangela kwi-LinkedIn, sinako ukusebenzisa amacebo okucoca ulwelo, ezinje ngokudibanisa isixeko, icandelo lomsebenzi (kufanelekile ukuba siyayazi inkampani okanye icandelo asebenza kulo mntu), kunye nenye idatha. Yonke into eyimfuneko ukuze sikwazi ukufumana loo mntu ngendlela elula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ungamfumana njani umntu okwi-intanethi?
Izixhobo ongekhe uziphose ekupheliseni ihlobo [SWEEPSTAKES]